Liiska: 5 Ciyaartoy Oo Liverpool Lasoo Saxiixan Karto Bisha January
Home Horyaalka Ingiriiska Liiska: 5 Ciyaartoy oo Liverpool lasoo saxiixan karto Bisha January
Dhibaatada dhaawac ee Liverpool xilli ciyaareedkan ma muujin in kooxda dhanka Daafaca dartii ay hogaanka lumiso Reds ay sii wado inay ku sii dhawaato meesha ugu sareysa ee Premier League 2020-21.
Dhaawacyada Virgil van Dijk iyo Joe Gomez ayay u badan tahay inay labada ciyaartoy ka maqnaan doonaan inta ka dhiman xilli ciyaareedka. Taas ayaa la macno ah in Joel Matip uu yahay daafaca dhexe ee kaliya ee la aqoonsan yahay ee uu heli karo Klopp. Si kastaba ha noqotee, xitaa walwalkiisa dhaawiciisa ayaa la micno ah in tababaraha Liverpool uu heysto fursado uu ka xusho.
Shan ciyaaryahan oo imaan kara Liverpool bisha Janaayo
5 Gleison Bremer
Daafaca dambeedka dhexe ee kooxda Torino Gelison Bremer ayaa loo arkaa inuu yahay dooq Liverpool ay macquul tahay in ay lasoo wareegaan.
Toddobaadyadii la soo dhaafey, dhowr saxafi oo caan ah ayaa ku adkeysanayey in Sven Botman uusan ku jirin liiska xiisaha Liverpool xilligan. Laakiin ciyaaryahanka reer Holland ayaa qaban kara indhaha Liverpool madama uu leeyahay awood kubadeed oo dhanka daafaca ah.
Daafaca dhexe ee kooxda Ajax ee Perr Schuurs ayaa noqon kara xiddig kale oo ay Liverpool la soo saxiixan karto bisha January inkasta oo uu jiro shaki laga qabo in uu diyaar u yahay in uu kor u qaado heerka ay Reds u baahan tahay.
2 Ben Caddaan
Brighton’s Ben White ayaa lagu soo waramayaa inuu wacdaro ku dhigay Liverpool xilli ciyaareedkii hore markii ciyaaryahanka uu amaah ugu joogay Leeds United waxana uu ku jiraa liiska kooxda Liverpool.
1 Dayot Upamecano
Dayot Upamecano waa xidig caan ah oo Liverpool ay heli karto bishaan. Waxaa doonaya kooxo badan, iyadoo Bayern Munich iyo Manchester United sidoo kale la sheegayo inay xiiseynayaan adeega ciyaaryahanka.
Previous articleWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Saaka: Tierney, Faivre, Anderson, Barkley, Brahim, Fernandinho
Next articleKhabiirka Pearce oo saadaaliyay Xidigaha Khadka Dhexe ee Liverpool kaga hortageyso Manchester United